The Kildare Maze - N'ime obodo
Nwee ọmarịcha ụbọchị ezinụlọ na -atọ ụtọ ma na -atọ ụtọ na ezigbo ihe ọchị na ọnụ ọnụ. N'elu ikuku ọhụrụ, nnukwu ogige mkpuchi Leinster bụ ọmarịcha ebe ezinụlọ ga -enwekọ ọnụ otu ụbọchị.
Ihe ịma aka gị na Hedge Maze bụ ịchọta ụzọ gị site na hectare 1.5 nke nwere okporo ụzọ ụlọ elu na -ekiri n'etiti maze. Ị ga -efu ụzọ, enwere ihe karịrị 2km nke ụzọ ma na -ekwe nkwa na ị ga -enwe ọtụtụ ọ funụ ịchọta ụzọ gị. Site na ụlọ nlele na -enwe ọmarịcha echiche gaa n'ime ime obodo na ógbè gbara ya gburugburu ma ọ bụ na -enwe ọ enjoyụ na nlele karịa maze na -ekpughe nhazi ya. St. Brigid, onye na -elekọta Kildare bụ ihe mkpali maka imewe ahụ, nke nwere obe St. Brigid dị n'ime akụkụ anọ, ebe etiti obe bụ etiti oke maze.
The Wooden Maze bụ ihe ịma aka oge na -atọ ụtọ ma a na -agbanwe ụzọ ya ugboro ugboro iji mee ka ị nọrọ na mkpịsị ụkwụ gị!
Agbakwunyere bụ ụzọ njem, Zip Wire, Crazy Golf na maka ndị ọbịa na -eto eto, mpaghara egwuregwu ụmụaka. Nri na ihe ọ areụ areụ dị n'ụlọ ahịa dị na saịtị ahụ.
Ịde akwụkwọ n'ịntanetị dị mkpa
Outdoors, Adventure & Ihe, Nwee ezumike ezinụlọ, Ihe Zoro Ezo, Clane
Mepee ngwụsị izu na Mee & Septemba
7 ụbọchị June, July & August
10 am-1pm Oge ma ọ bụ 2 pm-6pm Oge
Isiokwu ga -agbanwe, biko gaa na www.kildaremaze.com maka nkọwa ndị ọzọ